warkii.com » Saddex director oo ka baxay Bollywood saacado gudahooda…
Saddex director oo ka baxay Bollywood saacado gudahooda…
Waxaa wali fanka India ka dhex taagan muran iyo dagaal afka ah oo saameeyay dhammaan shirkadda, waxaana ay taasi sal dhig u noqotay inay dadka qaarkood dhaliilaan kuwa kale, halka kuwa qaarna ay shirkadda dhanba la dirireen.
Tani iyo markii uu nafta is dhaafiyay atoorihii geeriyooday ee Sushant Singh Rajput, waxaa dillaacay ka hadlidda is qaraabeysiga ka jira shirkadda filimada India, awoodda la siiyo xiddigaha ay dhaleen jilaayaashii hore iyo qaabka filim sameeyayaasha ay u xushaan qofka ay u dhiibanayaan filimadooda muhiimka ah doorkooda hoggaaminta.
Director Anubhav Sinha oo ku caan baxay inuu si daacad iyo kal nadiifnimo ah u hadlo ayaa si cad u shaaciyay inuu isaga tagay ka shaqeynta shirkadda Bollywood-ka, waxaana uu bartiisa ka ku soo qoray: “Bis, Waxaan halkaan isaga casilayaa Bollywood. Wax walba oo ay ahaataba.”
Filim sameeyahan ayaa isku daba-riday filimo ay ka mid yihiin Mulk, Article 15 iyo Thappad, waxaana xusid mudan xitaa bartiisa -ka inuu ka baddelay magaciisa oo markii hore ahaa Anubhav Sinha, waxaana uu ka dhigay Anubhav Sinha (Not Bollywood).
Geesta kale Sudhir Mishra ayaa soo raacay Anubhav, kaasoo isagana bartiisa -ka ku weeraray Bollywood-ka, Waxaana uu soo qoray: “Waa maxay Bollywood? Aniga waxaan halkan u imid inaan ka qayb noqdo Satyajit Ray ,Raj Kapoor,Guru Dutt,Ritwick Ghatak,Bimal Roy,Mrinal Sen , Hrishikesh Mukherjee,KAsif,Vijay Anand ,Javed Akhtar,Tapan Sinha, Gulzar ,Shekhar Kapur,Ketan Mehta , Bharatan n Aravindan iyo kuwo kale, waana halka aan waligey sii joogi doono.”
Sudhir ayaa sidaas isaga fogeeyay ka tirsanaanta Bollywood-ka, waxaana Sinha uu sheegay inay labadooda ka baxeen Bollywood, balse ay sameyn doonaan filimi Hindi ah.
Anubhav iyo Sudhir ayaa sidoo kale saaxiibbadooda sida Rajkummar Hirani, Hansal Mehta, Anurag Kashyap, Vikramaditya Motwane, Nikkhil Advani iyo kuwo kale u soo bandhigay inay kula midoobaan Indian Cinema.
Ugu dambeyn Filim sameeye Hansal Mehta ayaa iyaga ku biiray, waxaana uu bartiisa -ka ku qoray: “Waan tagay…”, iyadoo isla markiiba Anubhav uusoo qaatay qoraalkan Hansal, isagoo soo raaciyay inaan saddexdooda lasoo sheegi karin marka laga hadlaayo Bollywood-ka.